Walitti Bu'iinsa Magaalaa Mooyyaalee keessatti ka’een namni 2 ajjeefame. - NuuralHudaa
Majlisni Oromiyaa Koree deeggarsa harka qalleeyyiif walitti qabu hundeesse
KOROONAA MASJIDA CUFAA EENYUU YAADE?
Biyyoota Ardii Afrikkaa weerara Dhibee COVID-19 faalamanii fi bilisa tahan
Mootummaan Siri Lankaa reefa namoota muslimaa gubuu isaatiin hawaasa muslimaa biyyattii dallansiisuu gabaafame
Ardii Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota Vayirasii Koroonaatiin qabamanii saffisaan dabalaa jira
Majlisni Aanaa Dirree Salaatni Juma’aa fi Jama’aa masjidaatti akka hin geggeeffamne Murteesse
Mootummaan Sa’uudii dhimma Hajjii baranaa irratti murtii irra waan hin gahiniif muslimoonni obsaan akka eeggatan gaafate
Majlisni Naannoo Oromiyaa Masjidoonni akka cufaman ajaje
Filannoon biyyooleessa Itoophiyaa dabarfame
Ityoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota Vayirasiin Koroonaa irratti argame 21 gahuu ibsame
Home/Odeeyfannoo/Walitti Bu’iinsa Magaalaa Mooyyaalee keessatti ka’een namni 2 ajjeefame.
Walitti Bu’iinsa Magaalaa Mooyyaalee keessatti ka’een namni 2 ajjeefame.
Sabtii har’aa Asrii booda naannaawa sa’aa 11:00 magaalaa Mooyyalee ganda 02 kan Boolee jedhamuun beekamu keessatti walitti bu’iinsa uumameen, dhalattoonni Oromoo 3 rasaasaan kan dhahaman yoo tahu, namni 2 battalumatti du’ee tokko ammoo madaayuun beekame.
Ka’umsi walitti bu’iinsa kanaa dhalattoonni naannoo 5 iddoo waajjira isaanii kan duraaniitti alaabaa isaanii dhaabuuf yeroo yaalanitti, dargaggoonni naannoo Oromiyaa dura dhaabbatan. Kanuma hordofuun waraanni makkalaakayaa dhalattoota Oromoo lama ajjeesee tokko ammoo kan madeesse tahuu jiraataan magaalaa Mooyyalee irraa bilbilaan dubbisne nuuf hime. Namoota ajjeefaman jidduu tokko dhalataa Madda Waalabuu nama maqaan isaa Muusaa jedhamu tahuun beekameera.
Namni bilbilaan dubbisne kun akka nuuf himetti; yeroo ammaa dhukaasni kan dhaabbate tahus, ummanni magaalattii sodaa guddaa keessa jiraatuu fi sochiin daldalaa hundi dhaabbatee magaalaan guutuun too’annaa waraanaa jala jiraachuu nuuf hime.
Boorana Mooyyalee Oromiyaa